Semalt Anonyevera Of 4 Spam Botnets
Spam emails anoumba chikamu chemazana emafaira anosvika kuvanhu makombiyuta. Ruzhinji rwemaimeri vanhu vanogamuchira vanobva kune spam. Mune dzimwe nguva, idzi maimeri dzinotangira kubhoti uye botnets. Kurwisa botnet kurwisa hakusi nyore. Somuenzaniso, mumwe anofanirwa kufungisisa nezvehuwandu hwebhoti, mharidzo yakatumirwa pamwe chete nematope anotumirwa ne botnet - gossip slots casino review.
Oliver King, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt , anotaura pano pamusoro pezvimwe zvekudzivirira kwebhokisi uye kuti angadzora sei migumisiro. Gara wakachengeteka kubva kune zvinotevera.
Grnet botnet inoshandisa dzimwe nzira itsva kuti dzibudirire pane varo. Iyi botnet inonzi kernel-mode rootkit iyo yakaoma zvikuru kune zvinyorwa kuti zviione. Munzvimbo dzakawanda dzinoshandiswa, bhotela iri rinoshanda sechirwere chetachiona, iyo inokanganisa zvimwe zvekutsvaga kwevashandi vacho. Mukurwisana uku, zvinonzwisisika kuti vazhinji vehurukuro dzefaira dzinoshanda.
Kuwedzera kunowanzoitwa sepamisi kutengesa mishonga yemiti yakadai seViagra. Grum ine nhengo 600 000, ine mutoro wekutumira mairi emailiyoni makumi mana emazuva ega ega kune chinangwa chayo. Mazana acho anopawo zvinopfuura 25% zve spam emails mune zvayo.
Bobax inowanzoitwa botnet isingazivikanwi inowanikwa kuburikidza nemashandisi ewebhu. Uku kurwisa kunoita kuti zvive nyore kune vatsvuku vatsvuku kuti vazvione, zvisingakwanisi kutarisa. Pari zvino, zvinopfuura 10 000 nhengo dziri kurwisa uku..Saizvozvowo, inobatsira kusvika 15% yeese spam emails anotumirwa kupfuura nguva. Kubva mumufananidzo uyu, Bobax inotarisira kutumira anenge 27 mabhiriyoni spam emails zuva rega rega. Bobax kurwisana kwakafanana neBroad Krnet yakakurumbira. Mimwe yemararamiro ayo aisanganisira kushanyira kudana kuita chiito. Iyi spam inogona kurwisa zvinotevera nzira dzakasiyana. Nekunge iwe uchibhadhara bot, cherechedza iyo inobva.
Kubvira muna 2007, Pushdo ave achitumira spam emails kune vanopfuura 19 mabhiriyoni vese vashandisi vemunyika yose. Pushdo akatanga kuurayiwa kwevanhu vazhinji pedyo neBetnet yeDutu. Zvisinei, Dutu haisisiri mumutambo, asi Pushdo achiri kuenderera mberi. Pushdo inoratidzika semuwandisi wemapurogiramu. Apo vashandisi vanozviwana, zvinotora imwe software kuburikidza nezita Cutwail. Chigunwe chinowanzova spamming software, iyo inowana mukana wekombiyuta yaanotambudzwa. Pushdo spam inouya nenzira dzakasiyana-siyana, kusanganisira makasitositi epakombiyuta, mishonga uye phishing schemes.
Rustock yakapukunyuka kupararira kwepabetnet yakatanga kupera muna 2008. Zvimwe zvekurwiswa kwakawira pasi apa zvinosanganisira McColo botnet. Rustock botnet spam kurwisa ine musangano wezvinoda kusvika mamiriyoni maviri emabhodet. Imwe yemaitiro ayo akasiyana-siyana ekurwisana inosanganisira nzira iyo inorwisa kubva pa3 a.m. kusvika pa7 a.m. EST (GM-5) zuva rimwe nerimwe. Imaeils ine ma clones emaily kubva kune mamwe mazita eemail email uyewo zvemashoko ehupfumi ekubatanidza. Izvi zvinowanzooneka zvisingaoneki uye zvinogona kuonekwa sezvinowanzoitwa mishonga yemiti.
Kuparadzirwa kwemaEmail kunobva kune zvakajairika kusangana nevanhu vanoshandisa internet pazuva nezuva. Zvakakosha kuvaridzi vepanzvimbo yekushandisa sarudzo yekutsvaga spam. Uyezve, vashandi vepaIndaneti vanofanira kuita kuti makombiyuta avo ave akachengetedzwa nekuisa ikozvino yakagadzirwa spyware software.